Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. विप्लवलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने भनेकाे केही घण्टामै यस्तो विज्ञप्ति ! – Emountain TV
काठमाडौं, ११ असार । विप्लव समूहको कम्युनिस्ट पार्टीले आज मंगलबार घोषणा गरेको नेपाल बन्द सफल भएको दावी गर्दै विज्ञप्ति निकालेको छ ।
महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको हस्ताक्षरसहितको विज्ञप्तिमा सवारी नचलाएर आफूहरुलाई सहयोग गरेको ठहर छ । साथै वर्तमान सरकारलाई ‘केपी–पिके सरकार’को संज्ञा दिँदै यसविरुद्ध राष्ट्रघात, जनघातमा अघिल्ला सरकारलाई नै उछिनेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
विप्लवले भने सोही घटनाको विरोध स्वरुप आज नेपाल बन्द घोषणा गरिएको बताएको थियो । साथै विप्लवले विज्ञप्ति मार्फत सरकारलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रघाती शक्तिका विरुद्ध कम्युनिस्ट, देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिसँग एकता गर्दै संघर्ष गर्न तयार रहेको जनाएका छन् ।
सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विप्लव खुल्ला राजनीतिमा प्रवेश गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको भन्दै भाषण गरेकै दिन विप्लवले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्ट् दैनिकमा लेखेको छ ।